OG ကို အထငျသေးတာ မခံခငျြတော့လို့ ပွနျလညျဝငျရောကျ ကစားတာဖွဈကွောငျး ပွောသှားခဲ့တဲ့ Ceb – Gaming Noodle
OG ကို အထငျသေးတာ မခံခငျြတော့လို့ ပွနျလညျဝငျရောကျ ကစားတာဖွဈကွောငျး ပွောသှားခဲ့တဲ့ Ceb
TI ၂ နှဈဆကျ ခနျြပီယံဟောငျးအသငျးဖွဈတဲ့ OG ရဲ့ ကစားသမားဟောငျး Ceb ဟာ TI9 အပွီးမှာ အသငျးရဲ့နညျးပွအဖွဈ ပွောငျးလဲတာဝနျယူနခေဲ့ရာကနေ ယခုအခြိနျမှာတော့ ကစားသမားတဈဦးအဖွဈ တဈဖနျပွနျလညျဝငျရောကျလာခဲ့ပွနျပါပွီ။ Ceb ပွနျလညျရောကျရှိလာတဲ့အတှကျ OG အသငျးရဲ့ ပရိသတျမြားသာမက Dota2ပရိသတျမြားအားလုံးပါ ဝမျးမွောကျခဲ့ရသလို ပွနျလညျဝငျရောကျ လာရတဲ့အကွောငျးအရငျးကို သိလိုစိတျမြားလညျး ဖွဈပျေါလာကွပါတယျ။
မကွာသေးမီက ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ OG ရဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုအတှငျးမှာတော့ Ceb ဟာ ဒီအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှငျးလငျးပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ Ceb ရဲ့ ပွောကွားခကျြမြားအတှငျးမှာတော့ သူပွနျလညျဝငျရောကျ လာရခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးဟာ အခွားအသငျးမြားက OG အသငျးကို အထငျသေးတာ မခံခငျြတော့လို့ဖွဈကွောငျး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
Ceb ရဲ့ ပွောကွားခကျြမြားအတှငျးမှာတော့ “ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ အမွဲမှတျယူထားတဲ့အရာတဈခုရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ OG အသငျးဟာ TI ကို ၂ နှဈဆကျ အနိုငျရအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့အသငျးပါ။ ဘယျအသငျးကမှ ဒီလိုမြိုးဖွဈလာအောငျ မလုပျနိုငျခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုကတြော့ တခွားအသငျးတှကေ ကြှနျတျောတို့အသငျးကို နိုငျဖို့လှယျတယျဆိုပွီး အထငျသေးလာကွတယျ။ ဒီထငျမွငျယူဆခကျြကို ကြှနျတျောလကျမခံနိုငျပါဘူး။
“ကြှနျတျောတို့သာ အပွညျ့အစုံပွငျဆငျထားရငျ OG ကိုနိုငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျတဲ့ကိစ်စတဈခုမှနျး သူတို့အနနေဲ့ နားလညျသဘောပေါကျထားသငျ့ပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ OG ကို နိုငျဖို့လှယျပါတယျဆိုပွီး အထငျသေးကောငျးသေးနကွေဦးလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျးယှဉျပွိုငျကွရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ကို နိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာ သိထားလိုကျပါ” အစရှိသဖွငျ့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
OG ရဲ့ နညျးပွအဖွဈကနေ ကစားသမားအဖွဈ ၂ ကွိမျမွောကျ ​ပွနျလညျကူးပွောငျးလိုကျတဲ့ Ceb အတှကျ လကျခံခငျြစရာမကောငျးတဲ့ကိစ်စကတော့ ယငျးတို့အသငျးဟာ လူစာရငျး အပွောငျးအလဲမြား ပွုလုပျပွီး စဉျတညျးက ရှုံးနိမျ့မှုအမွောကျအမြားကို ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ခေဲ့ရတာပါ။ Season စတငျစဥျတညျးက ယခုအခြိနျထိ OG အသငျးအနိုငျရတဲ့ပွိုငျပှဲဆိုလို့ တဈခုမှမရှိသေးပဲ ရလဒျဆိုးမြားနဲ့သာ အဆုံးသတျ နခေဲ့ရပါတယျ။
ယခု season အတှငျး OG ဟာ WeSave! Charity Play ပွိုငျပှဲမှာ အဆငျ့ ၅ မှ ၈ အထိ ပူးတှဲနရော၊ ESL One Los Angeles 2020 Online မှာ ဒုတိယနရော၊ Gamers Without Borders 2020 charity Dota2ပွိုငျပှဲ, OGA Dota PIT 2020 Online Season 1 နဲ့ BLAST Bounty Hunt တို့မှာ တတိယနရော၊ Beyond EPIC မှာ အဆငျ့ ၇ နဲ့ ၈ ပူးတှဲနရော၊ ESL One Birmingham 2020 Online မှာ အောကျဆုံးနရောတို့ကိုသာ ရရှိခဲ့ပွီး WePlay! Pushka League Season 1 မှာဆိုရငျ qualifier အဆငျ့ကနေ ပွုတျသှားသညျအထိ အခွအေနဆေိုးနခေဲ့ပါတယျ။
အခြို့ပွိုငျပှဲမြားအတှငျးမှာ Ceb ဟာ stand-in အနနေဲ့ ခတ်ေတဝငျရောကျကစားခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယခုအခြိနျမှာတော့ သူဟာ အခြိနျပွညျ့ကစားသမားတဈဦးအဖွဈ ပွနျလညျဝငျရောကျလာပွီဖွဈပွီး ပွငျးထနျတဲ့ ယုံကွညျမှုမြားနဲ့အတူ OG အသငျးနိုငျပှဲမြားရလာစဖေို့ ကွိုးပမျးတော့မှာပါ။
Offlane ကစားသမား Ceb ပွနျလညျရောကျရှိလာတဲ့အတှကျ MidOne ဟာ လကျရှိ offlane ကစားသမားအဖွဈကနေ hard carry အဖွဈ ပွောငျးလဲကစားရတော့မှာပါ။ Hard carry ကစားသမားဟောငျး SumaiL ထှကျခှာသှားပွီး role အပွောငျးအလဲမြားလညျး ပွုလုပျနရေလို့ OG ရဲ့ လကျရှိအနအေထားဟာ အားပြော့သယောငျထငျရပမေယျ့ အသငျးထဲမှာ TI ၂ နှဈဆကျ ခနျြပီယံဟောငျး ၃ ယောကျတိတိ ပွနျလညျရောကျရှိနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Ceb ဟာ သူ့ရဲ့ သူငယျခငျြးကွီးမြားဖွဈကွတဲ့ N0tail နဲ့ Topson တို့နဲ့အတူ ပွနျလညျကစားလိုတဲ့အတှကျ ဝငျရောကျလာတာဖွဈကွောငျးကိုလညျး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ယခငျက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးမှုမြား၊ ယုံကွညျမှုမြား၊ အတှအေ့ကွုံကောငျးမြားကို ပွနျလညျတှကွေုံ့ ခံစားလိုတဲ့အတှကျ ဂိမျးအတူတူပွနျကစားကွတော့မှာဖွဈကွောငျးလညျး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ယခုအခြိနျမှာ အနားယူနပွေီဖွဈတဲ့ OG ရဲ့ ကစားသမားဟောငျး JerAx ကလညျး Ceb ကို ကစားသမားအဖွဈ ပွနျလညျမွငျတှရေ့လို့ ဝမျးမွောကျကွောငျး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူကိုယျတိုငျအနနေဲ့ကတော့ Dota2ပွနျလညျကစားဖို့အတှကျ စိတျမပါဖွဈနကွေောငျးနဲ့ ဆကျလကျအနားယူလိုကွောငျးတို့ကိုလညျး ပွောသှားခဲ့ပါ​သေးတယျ။
Ceb ဝငျရောကျလာမှုကွောငျ့ ယခငျကထကျ ပိုအားကောငျးလာတဲ့ OG အသငျးကို မွငျတှကွေ့ရဖို့ ပရိသတျမြားက မြှျောလငျ့နကွေပါတယျ။ ယုံကွညျမှုပွငျးထနျလှတဲ့ Ceb နဲ့အတူ ရှဆေ့ကျကွမယျ့ OG အသငျးရဲ့ အနာဂတျဟာလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
OG ကို အထင်သေးတာ မခံချင်တော့လို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ကစားတာဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့တဲ့ Ceb
TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံဟောင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ OG ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း Ceb ဟာ TI9 အပြီးမှာ အသင်းရဲ့နည်းပြအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူနေခဲ့ရာကနေ ယခုအချိန်မှာတော့ ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် တစ်ဖန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Ceb ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် OG အသင်းရဲ့ ပရိသတ်များသာမက Dota2ပရိသတ်များအားလုံးပါ ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရသလို ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို သိလိုစိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။
မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ OG ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ Ceb ဟာ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Ceb ရဲ့ ပြောကြားချက်များအတွင်းမှာတော့ သူပြန်လည်ဝင်ရောက် လာရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဟာ အခြားအသင်းများက OG အသင်းကို အထင်သေးတာ မခံချင်တော့လို့ဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Ceb ရဲ့ ပြောကြားချက်များအတွင်းမှာတော့ “ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အမြဲမှတ်ယူထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ OG အသင်းဟာ TI ကို ၂ နှစ်ဆက် အနိုင်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းပါ။ ဘယ်အသင်းကမှ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုကျတော့ တခြားအသင်းတွေက ကျွန်တော်တို့အသင်းကို နိုင်ဖို့လွယ်တယ်ဆိုပြီး အထင်သေးလာကြတယ်။ ဒီထင်မြင်ယူဆချက်ကို ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
“ကျွန်တော်တို့သာ အပြည့်အစုံပြင်ဆင်ထားရင် OG ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှန်း သူတို့အနေနဲ့ နားလည်သဘောပေါက်ထားသင့်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ OG ကို နိုင်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီး အထင်သေးကောင်းသေးနေကြဦးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းယှဉ်ပြိုင်ကြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိထားလိုက်ပါ” အစရှိသဖြင့် ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
OG ရဲ့ နည်းပြအဖြစ်ကနေ ကစားသမားအဖြစ် ၂ ကြိမ်မြောက် ​ပြန်လည်ကူးပြောင်းလိုက်တဲ့ Ceb အတွက် လက်ခံချင်စရာမကောင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ ယင်းတို့အသင်းဟာ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ပြီး စဉ်တည်းက ရှုံးနိမ့်မှုအမြောက်အများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ Season စတင်စဉ်တည်းက ယခုအချိန်ထိ OG အသင်းအနိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုလို့ တစ်ခုမှမရှိသေးပဲ ရလဒ်ဆိုးများနဲ့သာ အဆုံးသတ် နေခဲ့ရပါတယ်။
ယခု season အတွင်း OG ဟာ WeSave! Charity Play ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့် ၅ မှ ၈ အထိ ပူးတွဲနေရာ၊ ESL One Los Angeles 2020 Online မှာ ဒုတိယနေရာ၊ Gamers Without Borders 2020 charity Dota2ပြိုင်ပွဲ, OGA Dota PIT 2020 Online Season 1 နဲ့ BLAST Bounty Hunt တို့မှာ တတိယနေရာ၊ Beyond EPIC မှာ အဆင့် ၇ နဲ့ ၈ ပူးတွဲနေရာ၊ ESL One Birmingham 2020 Online မှာ အောက်ဆုံးနေရာတို့ကိုသာ ရရှိခဲ့ပြီး WePlay! Pushka League Season 1 မှာဆိုရင် qualifier အဆင့်ကနေ ပြုတ်သွားသည်အထိ အခြေအနေဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။
အချို့ပြိုင်ပွဲများအတွင်းမှာ Ceb ဟာ stand-in အနေနဲ့ ခေတ္တဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်မှာတော့ သူဟာ အချိန်ပြည့်ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ယုံကြည်မှုများနဲ့အတူ OG အသင်းနိုင်ပွဲများရလာစေဖို့ ကြိုးပမ်းတော့မှာပါ။
Offlane ကစားသမား Ceb ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် MidOne ဟာ လက်ရှိ offlane ကစားသမားအဖြစ်ကနေ hard carry အဖြစ် ပြောင်းလဲကစားရတော့မှာပါ။ Hard carry ကစားသမားဟောင်း SumaiL ထွက်ခွာသွားပြီး role အပြောင်းအလဲများလည်း ပြုလုပ်နေရလို့ OG ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားဟာ အားပျော့သယောင်ထင်ရပေမယ့် အသင်းထဲမှာ TI ၂ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံဟောင်း ၃ ယောက်တိတိ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Ceb ဟာ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ N0tail နဲ့ Topson တို့နဲ့အတူ ပြန်လည်ကစားလိုတဲ့အတွက် ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုများ၊ ယုံကြည်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ပြန်လည်တွေ့ကြုံ ခံစားလိုတဲ့အတွက် ဂိမ်းအတူတူပြန်ကစားကြတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ အနားယူနေပြီဖြစ်တဲ့ OG ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း JerAx ကလည်း Ceb ကို ကစားသမားအဖြစ် ပြန်လည်မြင်တွေ့ရလို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့ Dota2ပြန်လည်ကစားဖို့အတွက် စိတ်မပါဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ ဆက်လက်အနားယူလိုကြောင်းတို့ကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါ​သေးတယ်။
Ceb ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် ယခင်ကထက် ပိုအားကောင်းလာတဲ့ OG အသင်းကို မြင်တွေ့ကြရဖို့ ပရိသတ်များက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ယုံကြည်မှုပြင်းထန်လှတဲ့ Ceb နဲ့အတူ ရှေ့ဆက်ကြမယ့် OG အသင်းရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။